Ciiddan ka tirsan Nabad-ilaalinta QM oo lagu duray Tallaalka COVID 19 oo been abuur ah - Awdinle Online
Waxaa la soo weriyey in Ciiddanka Nabad-ilaainta QM ee ku sugan dalka Koonfurta Suudaan lagu duray Tallaalka COVID 19 oo been abuur ah (Fake COVID-19 vaccine).
Taliyaha Guud ee Ciiddanka dalka Thailand, General Chalermpol Srisawat ayaa xaqiijiyey in Ciiddankooda qeybta ah Nabad-ilaaiyayaasha QM ee dalka Koonfurta Sudan lagu duray Biyo, iyadoo Ciiddankaasi loo sheegay inuu yahay Tallaal loo qaato Hargabka, kaasi oo ka difaaci doona COVID 19.
Waxa uu intaasi ku daray in Dhakhtar u dhashay dalka Thailand uu Tallaalkaasi oo biyo ahaa ku duray 273 Askari oo u dhashay isla dalka Thailand, isagoo Askarigiiba ka qaatay 20 Dollar.
Mid ka mid ah Askartaasi ayaa ka shakiyey Tallaalkaasi, kadib, markii uu arkay in daawada caadi ahayn.
Waxa uu ku wargeliyey Sarkaakii isaga madadaxda u ahaa, waxaana la ogaaday in dhalooyinka tallaalka ku jireen Biyo caadi oo keliya.
Wakiilka Caafimaadka ee QM waxa uu ka codsaday Saraakiisha Ciiddanka Thailand ee Nabad-ilaalinta u joogta dalka Koonfurta Suudaan inay Dhakhtarka dib loogu celiyo dalkiisa hooyo iyo in taageero laga geysto sidii looga hortegi lahaa inaysan mar kale soo laabanin dhacdooyinkaasi.
Sarkaalka falkaasi geystay waxaa la sheegay inuu ka cararay shaqadiisa, iyadoo laga ruqseeyey Ciiddanka, lagalana laabtay Laysinkii Dhakhtarnimo.
Dhakhtarkaasi oo weli baxsad ah ayaan la ogeyn halka uu u baxsaday, waexayna waalidiintiisa sheegeen inuusan weli ku soo laabanin gurigiisa.
Dhakhtarkaasi waxa uu ka shaqeynayey Isbitaal ku yaalla dalka Koonfurta Suudaan muddadii u dhexeysay Bishii December ee sanadkii 209-kii ilaa bishii December ee sanadkii hore ee 2020-kii.
Waxaa mar laga joojiyey shaqada, kadib, markii lagu helay baaritaan la xiriira eedeymo wax-is-daba-marin ahaa.
Previous articleXildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo Muqdisho ku geeriyooday
Next articleDowladda oo Amartay in la xiro Goobaha Waxbarashada & kuwa lagu Caweeyo